Iran: Famaizana Sy Tsy Fahampiana, Kitapo Foana Ho An’ny Fiahiana Fahasalamana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2012 22:45 GMT
Tao amin'ny Arseh Sevom ity lahatsoratra ity no navoakan'i Peyman Majidzadeh voalohany.
Hossein Ali Shahriari, filohan'ny kaomisiona momba ny fahasalamana ao amin'ny parlemanta, nilaza hoe [fa], “Tsy nijery mihitsy ny sehatry ny fahasalamàna sy fitsaboana ny governemanta.” Nampiany fa azo ambara ho “tsy nisy vola mihitsy” natao ho an'ny tetibola sy ny fanafàrana fanafody tato anatin'ny enim-bolana lasa.
Ny minisitry ny fahasalamàma, Marzieh Vahid-Dastjerdi, ihany koa dia nanakiana ny fitsainjarana ny tetibola, hoy izy: “Tsy fantatray izay mitranga amin'ny volabe natokana hividianana fanafody.” Araka ny nambarany, 24% monja amin'ny tetibola ilaina hividianana fanafody no nomen'ny Banky Foibe
Ny kaomisionan'ny fahasalamana ao amin'ny parlemanta dia niresaka fitsipaham-pitokisana hatao amin'ny minisitry ny fahasalamana, izay nanitikitika ny sasany hanomboka hijery ny lafiny hafa amin'ilay tantara.
Ao anatin'ilay lahatsoratra Suffering by Design ao amin'ny bilaogy Uskowi mikasika an'i Iran, nanamarika ny mpanoratra hoe :
Mr. Hosseini avy ao Qasr-e-Shirin any Kermanshah koa, ao amin'ny bilaoginy[fa], dia nikiaka ny ahiahiny momba ny tsy fahampian'ny fanafody. Manakiana ny governemanta izy amin'ny filazan'ity farany fa 95% amin'ny fanafody ilaina no vokarina ao an-toerana ary manontany tena izy hoe mba firy amin'ireny fanafody vokarina ao an-toerana ireny no nahazo fankatoavana iraisam-pirenena ho manaraka fenitra. Manampy izy :
Ao anatin'ny lahatsorany am-bilaogy Challenges to People’s Health (Ny Fanambin'ny Fahasalamam-Bahoaka) [fa], Ahmad dia miresaka momba ireo marary mangirifiry noho ny hémophilie sy mampiseho ny ampahany amin'ny hirifirin'izy ireny vokatry ny tsy fahampian'ny fanafody. Hoy izy :
“Ny olana toy ireo sedrain'ny sehatra fiahiana ny fahasalamàna dia manome porofo mazava azo tsapain-tànana ny tsy firaharahian'ny governemanta ny resaka fahasalamàna. Ny fitondrantenan'ny governemanta mitohy [tsy mahavita] manome ny tetibola ilaina dia ho loza mitatao amin'ny ain'ireo marary an'arivorivony; zava-misy iray izay ezahan'ny Minisitry ny Fahasalamana afenina… saingy ny filazàna ny marina sy fanaovana izay handrenesan'ireo manampahefana azy io dia tsara lavitra noho ny fanaovana sorona ny ain'ireo an'arivony, tahaka ny an'ilay tanora vao 15 taona tratry ny aretina hémophilie [izay maty].”.
Anivon'ireo fanakianana rehetra momba ny famaizana sy ny politikan'ny governemanta mitarika mankany amin'ny tsy fahampian'ny fanafody, andiany iray misy Iraniana mpianatra sy mpikatroka mafàna fo mpiaro zon'olombelona any Alemaina sy Soisa no nanangana ONG tsy mikatsaka tombontsoa mba ho toy ny tetezana eo amin'ireo Eoropeana mpamokatra fanafody sy ireo marary any Iran. Tànana Manampy Ho an'i Iran dia mikendry ny hanome ireo marary ireo fanafody tsy fahita firy ao anatin'ny fotoana fohy monja.